निषेधाज्ञा खुकुलियो, सतर्कता भुलियो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बजार र अत्यावश्यक सेवा सहज भएसँगै मास्क लगाउने घटे, सेनिटाइजरको प्रयोग पनि कम हुँदा संक्रमण पुनः बढ्ने स्वास्थ्यकर्मीको शंका
असार ११, २०७८ सन्जु पौडेल, मधु शाही, दुर्गालाल केसी, मनोज पौडेल
लुम्बिनी, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु — निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता घटेको छ । मास्क नलगाउने बढेका छन् । असारमा बिहेको लगनसँगै खेतीपातीको याम छ । बजार खुलेपछि किनमेल गर्नेको भीड लाग्न थालेको छ ।
कपिलवस्तुको तौलिहवा बजारमा रहेको राष्टिय वाणिज्य बैंकमा लागेको सेवाग्राहीको भीड । तस्बिर: मनोज पौडेल/कान्तिपुर
रूपन्देहीमा जिल्ला प्रशासनले बिहान ११ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि बिनामास्क ओहोरदोहोर बढेको छ । दुई महिना घरभित्र बस्न बाध्य सर्वसाधारण चोकमा जम्मा भएर गफिन थालेका देखिन्छन् ।
असार पहिलो साता कोरोना संक्रमण दर ओरालो लागेको थियो । अहिले फेरि बिस्तारै अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढ्न थालेको छ । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा संक्रमित बढ्न थालेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले बताए । आकस्मिक कक्षमा अहिले १२ र मेडिकल वार्डमा ७ जना बिरामी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘आईसीयूमा १२ जना घटेका छैनन् ।’ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाहरु अस्पताल आइरहेको उनले बताए ।
भैरहवाको भीम अस्पतालमा कोरोनाका २० बिरामी उपचाररत छन् । खुकुलोपनाले सबै मानिस एकैपटक बाहिर आउँदा संक्रमित, नजिक रहेकाहरुसँगै सबै पुनः जोखिममै रहने अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. सिद्धार्थ पाण्डेले बताए । ‘पुराना बिरामी यथावत् छन्, ह्वात्तै सबै बाहिर निस्किँदा समुदायमा संक्रमण दर बढ्छ,’ उनले भने, ‘लापरबाहीले जोखिम फेरि बढाउन सक्छ ।’
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बुटवलको मिलनचोकमा देखिएको चहलपहल । तस्बिर: सन्जु पौडेल/ कान्तिपुर
भैरहवाकै युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा बिरामीको संख्या १५ छ । पहिलेको तुलनामा निकै कम भएको जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले बताए । संख्या घटेकै आधारमा महामारी गइहालेको भन्न नसकिने भन्दै घरघरमा रहेका संक्रमित र उनीहरूका आफन्तले समेत समुदायमा फैलन नदिने गरी सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अस्पताल नआएका बिरामीको अनुगमन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूका घरका सदस्य खुलेआम हिँडडुल गर्दा संक्रमण अन्यत्र फैलन समय लाग्दैन ।’ रूपन्देहीमा रहेका कोरोना उपचाररत अस्पतालमा ७६ जना बिरामी रहेकामा २३ जना अन्य जिल्लाका रहेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए ।
नेपालगन्जमा पनि लापरबाही बढेको छ । बजारमा भेटिनेका न मुखमा मास्क छ, न त हातमा सेनिटाइजर । बजारमा किराना पसल, फलफूल चोक, तरकारीका हाट बजार सबैमा यसरी नै किनमेल हुन्छ । जिल्लामा दुई महिनाभन्दा लामो अवधि जारी कडा निषेधाज्ञा संक्रमितको संख्यामा कमी आएपछि खुकुलो बनाइएको छ । जिल्ला प्रशासनले असार १४ सम्म निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको हो । दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्ने पसलमा चाप छ । यद्यपि, सिनेमा हल, फन पार्क, सार्वजनिक यातायात भने बन्द छन् । कोहलपुर–२ का भीमबहादुर कार्की चौराहामा फलफूल बेच्छन् । उनले मास्क लगाएर केही दिनअघिसम्म फलफूल बेचेका थिए । तर, अहिले उनको मुखबाट मास्क हटेर हातमा पुगेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि बजारमा चहलपल बढ्दै छ । व्यापार गर्ने र किनमेल गर्ने निस्फिक्री छन् । ‘कोरोना छैन रे, त्यसैले मास्क लाउन छोडेको,’ कार्कीले भने ।
बाँकेमा दोस्र्रो लहरको कोरोना संक्रमणको संख्या अहिले ओरालो लागेको छ । यहाँ एक सयको हाराहारीमा संक्रमित छन् भने छिमेकी जिल्ला बर्दियामा ५ सय संक्रमित छन् । यसले कोरोना पूरै शून्य भएको भन्न नमिल्ने जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठले बताए ।
दाङका सडकमा निजी सवारीसाधनको चाप छ । बजार बिहान ६ देखि दिउँसो २ बजेसम्म खुल्न पाउने भएपछि किनमेल गर्नेको भीड छ । सरकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू १० देखि ३ बजेसम्म खुला छन् । यी कार्यालयमा सेवा लिन आउनेहरूको चाप पनि त्यत्तिकै छ । प्रहरी प्रशासनले पनि सडकमा जाँच गर्ने, रोक्ने अवस्था छैन । अहिले जिल्लामा कोरोना महामारी सकिएजस्तै भान हुन थालेको छ । अहिले कोरोना संक्रमणप्रति मानिसमा चरम लापरबाही बढेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अंगदबहादुर शाहीले बताए ।
‘मानिसहरूको लापरबाही यति बढेको छ कि अब केही समयपछि फेरि भयावह स्थिति आउने खतरा छ । मास्क नलगाई भीडभाड गरिरहेका छन्, व्यापार व्यवसाय चलाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कपाल काट्नेजस्ता संवेदनशील व्यवसाय पनि भित्रभित्रै चलेका छन् । मास्क नलगाई हिँड्नेलाई सम्झाउन खोज्दा उल्टै गाली गर्छन् ।’ लापरबाहीले संक्रमणको जोखिम नघट्ने उनले बताए । संक्रमितको संख्या केही कम भएपछि मानिसहरू फेरि पुरानै दिनचर्यामा फर्किन खोजेको कोरोना अस्पताल लमहीका प्रमुख डा. पुष्प भुसालले बताए । ‘मानिसहरूले फेरि कोरोनाको डर बिर्सन थाले । सतर्कता केही पनि छैन । मास्क लगाउन, भीडभाड नगर्न र जथाभावी नहिँड्न जति अनुरोध गर्दा पनि मानिसहरू मानिरहेका छैनन्,’ कतिपयले सामान्य रुघाखोकीजस्तो ठानेर पचाइरहेका छन् । खेतीपातीलगायत गाउँघरका काम भीडभाडमै भइरहेका छन् । यसले संक्रमणको जोखिम धेरै नै बढाएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक नवराज लामिछानेले बताए । ‘बिरामीहरू घटिसकेका छैनन् तैपनि लापरबाही बढ्दो छ,’ उनले भने ।
कोरोना महामारीभन्दा भोकको समस्या बढेकाले मानिसहरू अटेर गरेर बजारमा निस्कन थालेको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । ‘मानिसहरूको रोजीरोटी संकटमा परेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको मात्रै जोखिम देखाएर बन्द गरिराख्ने अवस्था छैन । खानेकुरा जुटाउने उपाय पनि गर्नैपर्‍यो । अब केही सहज हुँदा खुकुलो गर्दै जानुपर्छ ।’
कपिलवस्तुको तौलिहवा बजारस्थित सिटिजन्स बैंकमा लागेको सेवाग्राहीको भीड । तस्बिर: मनोज पौडेल/कान्तिपुर
जीविका चलाउनुपर्ने, घर भाडा तिर्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्नेजस्ता समस्याले बाहिरी रूपमा सटर बन्द भए पनि भित्रभित्रै व्यापार व्यवसाय चलिरहेको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले बताए । ‘व्यापारीले भोकै मर्ने अवस्था आयो भनिरहेका छन् । अलिअलि खुकुलो गर्दै जानुपर्छ भन्ने दबाब बढी छ । त्यसकारण व्यापार व्यवसाय खुल्दै गएका हुन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने कुरामा हामीले पनि सचेत पारिरहेका छौं । व्यवसाय गर्दा पनि सुरक्षामा त ख्याल गर्नैपर्छ । यसबारे हामीले अनुगमन पनि गरिरहेका छौं ।’
कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार ७ गते जारी गरेको आदेशमा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, तालिम र गोष्ठीलाई निषेध गरिएको सेवामा राखेको छ । तर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले आदेशविपरीत लबनी स्वास्थ्यचौकीमा महिला स्वयंसेविकाहरूको १० दिने तालिम सञ्चालन गरेको छ । २० महिला स्वयंसेविका आठ दिनदेखि तालिम लिइरहेका छन् ।
उता, कपिलवस्तु नगरपालिकाले बिहीबार आफ्नै सभाहलमा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । शिवराज नगरपालिकाले वडा ५ को सभाहलमा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । दुवै कार्यक्रम खचाखच भीड जम्मा गरेर गरिएको थियो । जबकि, भीडभाड नहुने गरी कार्यालयलाई सेवा सञ्चालन गर्न प्रशासनले आदेश जारी गरेको छ ।
प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०९:५०
निषेधाज्ञाको अवधिमा ४४ जना पक्राउ, ४० मुद्दा दायर
असार ११, २०७८ भवानी भट्ट
कञ्चनपुर — जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीले सोमबार दोधारा चाँदनी नगरपालिका–८ सुन्दरनगर क्षेत्रबाट लागूऔषधसहित एक भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लियो । भारत उत्तराखण्डको उद्यमसिंहनगर जिल्लाको खटिमा बस्ने २१ वर्षीय आसिफ खानलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । उनको साथबाट २८ ग्राम अफिमसमेत बरामद भएको छ ।
भारतीय नागरिक अफिमसहित पक्राउ परेको अघिल्लो दिन आइतबार भीमदत्त नगरपालिका– ६ ऐठपुर क्षेत्रबाट प्रहरीले खैरो हेरोइनसहित २ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सोही क्षेत्रका २० वर्षीय सागर तिरुवा र २८ वर्षीय महेन्द्र बोहरालाई साढे ६ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरिएको हो । उनीहरू ऐठपुर क्षेत्रमा लागूऔषधको कारोबार गर्नेमध्ये रहेको प्रहरीले जनाएको छ । आइतबारै जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलडाडी गाउँपालिका–२ को चवन्नी बजारबाट खैरो हेरोइनसहित २ जना पक्राउ परे । बेलडाडी गाउँपालिका –५ का अनिल राना र जन्मकुमार रानालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूबाट २ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि वैशाख १६ देखि जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । यो अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका निकायले यो अवधिमा हरेक दिन लागूऔषधसहित एक/दुई जना पक्राउ नगरेको दिन छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार निषेधाज्ञा सुरु भएपछि वैशाख १६ देखि जेठसम्म लागूऔषधको ४० मुद्दामा ४४ जना पक्राउ परेका छन् । वैशाखमा १२ मुद्दामा १९ जना र जेठमा २८ मुद्दामा २५ जना पक्राउ परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म लागूऔषधका १ सय २३ मुद्दामा २ सय १ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट करिब १ किलोग्राम खैरो हेरोइन, अढाइ किलोग्राम चरेस, ६ सय ३० ट्याबलेट नाइट्रामेट, स्यास्मो १ सय १६ ट्याबलेट, कोरेक्स ६ ट्याबलेट र ट्रामाडोल ६ सय पिस बरामद गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा लागूऔषधका ५५ मुद्दा मात्रै दर्ता भएका थिए ।
कोरोना संक्रमण रोकथामकै लागि अवैध नाकाहरू बन्द भएको झन्डै डेढ वर्ष नाघिसकेको छ । तर लागूऔषध तथा अन्य अवैध सामान ओसारपसार भने धमाधम भइरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका युनिटले लागूऔषधसहित भारतीय नागरिक पक्राउ गर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । प्रहरीले लागूऔषधसहित पक्राउ गरेका अधिकांश नेपाली पनि सीमा क्षेत्रमै भेटिएका हुन् । ‘बेलौरी र बेलडाडी क्षेत्र लागूऔषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा घाँस काट्ने बहानामा पनि लागूऔषधको ओसारपसार भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार बेलौरीको सीमावर्ती बजार खजुरिया र बेलडाँडीको सीमावर्ती बजार टाटरगञ्जबाट लागूऔषध भित्रिने गरेको छ ।
यसबाहेक दोधारा चाँदनी क्षेत्रबाट समेत भित्रिने गरेको छ । तर मुख्य नाकाबाट भने न्यून मात्रामा भित्रिएको छ । फागुनमा बेलौरी नगरपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरीसँग दोहोरो फायरिङ हुँदा एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको थियो । अन्य दुईजना घाइते भएका थिए । उनीहरू लागूऔषधसहित नेपाल प्रवेश गरिरहेका थिए । ‘नाका बन्द छ, तर घर आँगन र खेतबारी जोडिएको छ, खेतीपातीका नाममा वा घाँस काट्ने नाममा लागूऔषध ओसारपसार हुन्छ,’ एसपी चतुर्वेदीले भने, ‘डोकेबजारदेखि ब्रह्मदेवसम्म सबै क्षेत्रमा चौबिसै घण्टा निगरानी गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।’ एसपी चतुर्वेदीले सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षा निकायको बैठकमा लागूऔषधको ओसारपसारमा संलग्न केही भारतीयको लिस्टसमेत बुझाएको जानकारी दिए ।
प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०९:४७